VLC sida xaqiiqada ah waa ciyaaryahan video oo caan ah, in ay fududaato in la isticmaalo iyo waafajinta mahad. Waa barnaamij u furan il in ay maamushaa qaar ka mid ah qaabab video ugu badan, oo ay ku jiraan .flv, qaabka caadiga ah waxaad ka heli doontaa on vimeo iyo YouTube. Xataa waxaad u isticmaali kartaa iyadoo qaar ka mid ah beddelka fudud inuu u ciyaaro filimada ee 3D.
Halkan sida loo ciyaaro filimada 3D on VLC. Bilow furitaanka aad ciyaaryahan VLC, ka dibna ay yeerto Tools on toolbar ah.
Next, guji Raadka iyo safeeyuhu. Laga soo bilaabo menu in, guji Video Raadka.
Marka aad riixi on Video Raadka aad ka dibna riix doonaa Vout / dahaadhaa. Waxaa jira ku taxan ee soo socda si Wall aad u baahan doontaa in guji, sida aad ka arki in image hoose. Waxaad u baahan doontaa in ay saf ugu qarka u saaran inay 3 iyo tiirar qarka u saaran inuu 2. Marka aad ka dhigay doorashada aad, haatan waxaad ka arki kartaa VLC u muuqataa in daaqadaha badan. Dooro mid ka mid ah daaqadaha, waxa ay u ballaadhiyo si shaashad buuxda, oo aad doonaa in la daawado aad movie ee 3D.
Waxaad isku dubaridi kara muuqa ah ee loo maqli karo, sidoo kale. Burcad aad ciyaaryahan VLC, ka dibna riix Tools, ka dibna aad rabtid. Riix Show All Settings in aad arki doonaa hoose ee shaashadda. Dul qaybta Video ah, guji Custom Aragti Saamiga oo la qabsato 32: 9. Xir VLC iyo guuleysatey barnaamijka.
Next, dib u menu Tools tago, guji Raadka iyo safeeyuhu, ka dibna Video Raadka. Oo halkaasaannu ka, Dalag xulo ku riday 960ox qiimaha ku yaal dhinaca midig. Markaa waa inaad aadaa Menu iyo guji Video, ka dibna ku muuqa. Wax ka beddelkan ayaa sidoo kale 32: 9, iyo sidoo kale waa in aad xulan 1920 X 816 si aad u qaraar screen dejinta loogu sawir tayo wanaagsan. Si aad runtii u saamayn ugu wanaagsan, waxaad u baahan doontaa koob 3D, sidoo kale, iyo laptop ama monitor screen wanaagsan.
Taasi sida ay u fududahay in daawado filimada VLC 3D. Dhowr qasabno iyo aad doontaane.
Haddii aad rabto in aad ogaato sida loo ciyaaro filimada 2D, abuurtaan aad ciyaaryahan VLC kaliya, doortaan tayada sawirka aad rabto in aad aragto in ka, iyo bilaaban daawashada.
Waxaa jira hab kale oo uu u ciyaaro filimada on your computer, iyo in uu yahay adigoo isticmaalaya ah Wondershare Video Converter Ultimate . Waxaad ka ciyaari kara filimaanta labada 2D iyo 3D ku yaal ama badalo video in 3D si fudud.
Mid ka mid ah waxyaabaha ugu weyn oo ku saabsan Wondershare waa in ay tahay mid aad u diro daafaca. Waa awoodo inuu ciyaaro Kumaan weyn oo qaabab video, sidaa darteed uma baahnid in aad walwasho ku saabsan hal ciyaaryahan u .mp4 oo kale WMA. Waxaa u ciyaara video qeexidda caadiga ah, HD video iyo files audio fudayd. Waxaad sidoo kale ka ciyaari kara subtitles aad video isticmaalaya dameer, SSA, ama SRT (Advanced xarumo Alpha iyo xarumo Alpha, ama SubRip Text) on.
Versions Desktop of software ah u ogolaanayaan in loo maqli karo DVD iyo sidoo kale videos aad la abuuro ama download. Ka helay filim aad naftaada toogtay aad casriga ah? Dhib ma leh. Ma duubaan qalin ah ayaa dhawaan ku saabsan fiidiyo? Wondershare U ciyaari karaa, sidoo kale.
Qaar ka mid ah qaababka kale ee weyn waxa ka mid ah oo ku saabsan barnaamijka ogolaado in aad u ciyaaro videos ka fayl haddii aadan rabin in online baadhaan. Waxa kale oo aad samayn kartaa gelinka dambe ah oo madadaalo ay isku soo dubaridaan playlist in kaliya ku sii hayaan mahad play joogto ah. Ma u baahan tahay inuu ka tago video ah? Wondershare Player Xusuusan karaa meesha aad iska daayeen oo soo qaado ciyaaro halkaas ka.
Sidaas daraaddeed waxaa aad u leedahay - laba jid oo sahlan si aad u daawato aad videos, jidka aad ku qalab kasta. Waxaad iyaga ku wadaagi karaan, dhaqaajiyaan, ama uun u daawado. Qaado videos kula ama iyaga u aragto guriga - waa idinka ayay idiin taallaa.
Sida loo Play M2TS Faylal ay la VLC Media Player?
> Resource > VLC > Sida loo Play 3D Movies la VLC